Buhari aide dia manameloka ny 'habibiana' amin'ireo mpanao fihetsiketsehana Nizeriana - mpampita ny teles
Manameloka ny 'habibiana' amin'ireo mpanao fihetsiketsehana Nizeriana ny mpanampy an'i Buhari
By bryanekobe Last nohavaozina Oct 9, 2020
Mpanampy amin'ny haino aman-jery iray an'ny filoha Muhammadu Buhari no namaly ny tatitra fa voatazona mafy ny hetsi-panoherana ny zoma teo amin'ny sehatry ny polisy Sars.
"Ny polisy izay tokony hanome saron-tava sy tavoahangy tavoahangy amin'ireo mpanao hetsi-panoherana milamina ... Ny valin'ny herisetra nataon'ny polisy dia tsy habibiana nataon'ny polisy vaovao," hoy i Tolu Ogunlesi tamin'ny bitsika iray.
Olu Onemola, mpikarakara fiaraha-monina izay niasa tamin'ny naha mpanampy azy teo amin'ny Antenimieran-doholona Nizeriana, dia nilaza izy sy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy nosamborin'ny polisy handeha hamonjy ny fihetsiketsehana ao Abuja renivohitra.
"Natosika ho any ambadiky ny pickup" izy mirahalahy alohan'ny hanaovana fanambarana ary navotsotra, hoy ihany izy.
Ny sasany kosa nilaza fa entona mandatsa-dranomaso sy poa-basy no entina handroahana ireo mpanao fihetsiketsehana milamina:
Vaovao vaovao: Will Smith sy Martin Lawrence hitondra antsika Bad Boys 3! - Lahatsary
10 Formas en las que el diablo se está metiendo en tu vida y que tal vez no sabías - Video